Umonakalo we-formaldehyde egqithileyo kwimethi yemoto
Ukonzakala kwe-formaldehyde egqithisileyo kwimethi yemoto Idatha evela kuLawulo lweSizwe kuLawulo loKhuseleko eziNdleleni (NHTSA) ibonisa ukuba iingozi zendlela ezibangelwa ziimethi zemoto ziqhelekile. Kucingelwa ukuba umatshini omncinci wemoto nawo unoku ...
Kwixesha lasemva kobhubhane, gxila kwindlela entsha yemethi yemoto.
Kwixesha lasemva kobhubhane, gxila kwindlela entsha yemethi yemoto Ukuqhambuka kwe-COVID-19 kwi2020 kunyanzelise isixeko ukuba sicinezele iqhosha lokuphumla. Emva kobomi obude bekhaya kunye neendaba ezingenakubalwa malunga nokulwa ubhubhane, wonke umntu unengcinga entsha ...
Inkampani yethu iya kubamba i-16th Automechanika Shanghai kwi-National Exhibition kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai) ukusukela nge-2 ukuya kwi-05 ka-Disemba, ngo-2020. wou ...
Kutheni le nto unyanzelisa ekwenzeni inaliti enye-ebunjiweyo yemoto yePE?
I-China ihlala ibizwa ngokuba ngumzi-mveliso wehlabathi. Ngokuphuculwa kwamandla oqoqosho olubanzi lwase China, ukubakho kweemarike ezinkulu kuye kwenza ukuba intengiso yaseTshayina kufuneka ibonwe ziimpawu zamanye amazwe. Iinkampani zamazwe ngamazwe kunye neempawu zamanye amazwe zikhawulezile ...
Ngoku ukuba iimveliso ze-TPE zisetyenziswe ngokubanzi kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla nakubomi bethu, inokubonakala kwakhona ukuba iimveliso ze-TPE ziye zaba yimfuneko kubomi bethu, ke zithini izinto ze-tpe eziluhlaza? Ihlanganiswa njani i-TPE? Ukusuka koku ukuqonda: ...